कोरियन केटीहरु अति नै सुन्दर हुनुको रहस्य – Khabar Silo
एजेन्सी । विश्वमा कोरियन केटीहरु अति नै सुन्दर सुचीमा पर्छन् । दिनभरीमा उनीहरु यस्तो टिप्स फलो गर्दछन्, जसबाट उनीहरुको स्किनको ग्लो बढ्ने गर्दछ । यहाँका केटीहरु नेचुरल रुपमा नै यति धेरै सुन्दर हुन्छन् कि बाँकी देशको तुलनामा यहाँ धेरै सुन्दर केटीहरु देख्न सकिन्छ ।
कोरियाका केटीहरुको सुन्दरताको रहस्य यस्ता छन् । जुन टिप्सलाई आफ्नो जीवनमा अपनाएर तपाई पनि आफ्नो स्किनको ग्लो र सुन्दरता बढाउन सक्नुहुनेछसबैभन्दा पहिले अनुहारलाई तातो टावेलले कभर गर्ने । त्यसपछि टावेलको माथिबाट नै हल्का मसाज गर्ने र १५ मिनेटपछि टावेल हटाउने । यसबाट अनुहारको ब्लड सर्कुलेसन बढ्छ र ग्लो पनि बढ्ने गर्दछ ।
साल्ट टनिकको प्रयोगः एक चम्चा नुनलाई एक गिलास पानीमा मिसाउने । मुख सफा गरेर उक्त नुनपानीले अनुहार धुने । ड्यामेज स्किन भएकाहरुले भने यो उपाय नअपनाउदा नै राम्रो मानिन्छ ।
कागतीको रसको प्रयोगः कोरियाका केटीहरु अनुहारका अलावा बाँकी शरिरका भागहरु सफा गर्नका लागि पनि कागतीको रसको प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।जसबाट उनीहरुको सुन्दरता कायम रहने गर्दछ ।
Posted on December 1, 2020 December 1, 2020 Author khabar silo
हिन्दू धर्मशास्त्रमा शुभ र अशुभ विषय बारे उल्लेख गरिएको पाउन सकिन्छ।अहिलेको वैज्ञानिक युगमा यस्ता कुराहरुमा विश्वास नगर्नेको संख्या उल्लेख्य छ तर केहीले भने यस्ता कुरुालाई सही मान्छ जिवनमा विभिन्न कालखण्डमा आउने विभिन्न संकेतले शुभ र अशुभ कुराबारे जानकारी दिने धर्म शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न […]
Posted on March 14, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ । वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भनेको महिला पुरुषको मिलन मात्र नभई दुई परिवारको मिलन पनि हो। पारिवारिक मेलमिलाप र वैवाहिक जीवन सुखमय भएमा मात्र जीवन सुखद रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। आफ्नो जिवनमा आउने जीवन साथी उत्कृष्ट परोस् भन्ने हरेक पुरुषको चाहाना हुन्छ। उस्तै परिवारले पनि बत्तिसै लक्ष्निले युक्त बुहारीको आस राखेका हुन्छन्। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार […]
Posted on November 30, 2020 Author khabar silo
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: भगवान छन भने चोखो मनले लाईक गरि सेयर गर्नुहोस, एक बाबाले खोले मुक्तिनाथ मन्दिरको रहस्य ! १०८ धारा नै किन ? भिडियो सहित मुस्ताङको मुक्तिनाथ (३८०० मिटर) मन्दिर पवित्र थलो हो । हिन्दु र बौद्धमार्गि दुबैको साझा तिर्थ । बर्सेनी लाखौंको भिड लाग्छ । मन्दिर दर्शन गरेर त्यहाँको १०८ धारामा […]